ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်နေမှုတွေ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေး အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ သောကြာနေ့က တွေ့ဆုံကြပါတယ်။
အီးယူဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေ အဖြစ် မကြုံစဖူး လိုအပ်နေတဲ့ ဒေါ်လာ ၂.၁ ထရီလီယံ အတွက် ဘယ်လိုထည့်ဝင်ကြမယ် ဆိုတာကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သိပ်ကို ခက်ခဲမယ်လို့ အီးယူအလှည့်ကျ ဥက္ကဌ ဂျာမဏီနိုင်ငံက ဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel က မျှော်လင့်ထားတာပါ။
ဒီကပ်ရောဂါကြောင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြား ထိတွေ့မှု သိပ်မရှိတဲ့အတွက် အခြေနေမှန်ကို မခန့်မှန်းနိုင်ကြကြောင်းနဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ သိပ်ကြီးနေချိန်မို့ အခုဆွေးနွေးမှု အောင်မြင်မယ် မအောင်မြင်ဘူး ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဝန်ကြီးချုပ် Merkel က ပြောပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၂၇ နိုင်ငံပါ အီးယူဥရောပသမဂ္ဂဟာ အခုအချိန်မှာ စီးပွါးရေးကျဆင်းမှု အဆိုးဝါးဆုံး ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ကြားမှာလည်း တခြားနိုင်ငံတွေကို အကူညီပေးဖို့ ဘယ်နိုင်ငံက အလှူငွေ အများဆုံးထည့်ဝင်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွါးရေး ပြန်ကောင်းစေဖို့ ဘယ်နိုင်ငံက အကူငွေ အများဆုံးရသင့်တယ် ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွါးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အရေးပေါ်ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်လာတာကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မကူးစက်အောင် ကာကွယ်မယ့် ဗွီဒီယိုကတဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ မလုပ်တော့ပဲ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ ကြတာပါ။ ဒါဟာ ဒီကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးချိန်ကစပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အီးယူခေါင်းဆောင်တွေ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဌ. Ursula von der Leyen ကတော့ အီးယူအဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်မှု လုပ်နိုင်ရင် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကို ကောင်းကောင်း ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေကို ချပြထားတာကြောင့် အဖြေရနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗဈ တိုကျဖကျြရေးနဲ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးတို့အတှကျ အီးယူခေါငျးဆောငျတှဆှေေးနှေး
ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါကွောငျ့ ထိခိုကျနမှေုတှေ ပွနျလညျထူထောငျနိုငျရေး အစီအစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆှေးနှေးဖို့ အီးယူ ဥရောပသမဂ်ဂခေါငျးဆောငျတှဟော ဘယျလျဂြီယံနိုငျငံ ဘရပျဆဲလျမွို့မှာ သောကွာနကေ့ တှဆေုံ့ကွပါတယျ။
အီးယူဘတျဂကျြနဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါ ပွနျလညျထူထောငျရေး ရနျပုံငှေ အဖွဈ မကွုံစဖူး လိုအပျနတေဲ့ ဒျေါလာ ၂.၁ ထရီလီယံ အတှကျ ဘယျလိုထညျ့ဝငျကွမယျ ဆိုတာကို ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးကွမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ သိပျကို ခကျခဲမယျလို့ အီးယူအလှညျ့ကြ ဥက်ကဌ ဂြာမဏီနိုငျငံက ဝနျကွီးခြုပျ Angela Merkel က မေြျှာလငျ့ထားတာပါ။
ဒီကပျရောဂါကွောငျ့ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှကွေား ထိတှမှေု့ သိပျမရှိတဲ့အတှကျ အခွနေမှေနျကို မခနျ့မှနျးနိုငျကွကွောငျးနဲ့ ကှဲပွားမှုတှေ သိပျကွီးနခြေိနျမို့ အခုဆှေးနှေးမှု အောငျမွငျမယျ မအောငျမွငျဘူး ဆိုတာလညျး ခနျ့မှနျးလို့ မရနိုငျဘူးလို့ ဝနျကွီးခြုပျ Merkel က ပွောပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျ ၂၇ နိုငျငံပါ အီးယူဥရောပသမဂ်ဂဟာ အခုအခြိနျမှာ စီးပှါးရေးကဆြငျးမှု အဆိုးဝါးဆုံး ကွုံတှနေ့ရေတာ ဖွဈပွီး အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှေ ကွားမှာလညျး တခွားနိုငျငံတှကေို အကူညီပေးဖို့ ဘယျနိုငျငံက အလှူငှေ အမြားဆုံးထညျ့ဝငျရမယျ ဆိုတာနဲ့ ကဆြငျးနတေဲ့ စီးပှါးရေး ပွနျကောငျးစဖေို့ ဘယျနိုငျငံက အကူငှေ အမြားဆုံးရသငျ့တယျ ဆိုတာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အငွငျးပှါးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို အရေးပျေါဆှေးနှေးဖို့ ဖွဈလာတာကွောငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမကူးစကျအောငျ ကာကှယျမယျ့ ဗှီဒီယိုကတဆငျ့ ဆှေးနှေးပှဲ မလုပျတော့ပဲ ကိုယျတိုငျတှဆေုံ့တဲ့ ဆှေးနှေးပှဲကငျြးပ ကွတာပါ။ ဒါဟာ ဒီကပျရောဂါ ဖွဈပှါးခြိနျကစပွီး ပထမဆုံး အကွိမျအဖွဈ အီးယူခေါငျးဆောငျတှေ လူကိုယျတိုငျတှဆေုံ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဥရောပကျောမရှငျဥက်ကဌ. Ursula von der Leyen ကတော့ အီးယူအဖှဲ့ဝငျတှေ အနနေဲ့ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျမှု လုပျနိုငျရငျ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ပွဿနာကို ကောငျးကောငျး ကြျောလှားနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျးနဲ့ လုပျနိုငျတာတှကေို ခပြွထားတာကွောငျ့ အဖွရေနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။